အာလူးရိတ်သိမ်းရန်လမ်းညွှန် - Potatoes News
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဥယျာဉ်၏နာမည်ကြီးအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သောအာလူးသည်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည် စိုက်ပျိုးရန်အလွယ်ဆုံးသီးနှံများမရ။ ထိန်းသိမ်းမှုနည်း။ စွယ်စုံသုံးသီးနှံအာလူးပင်များသည်ပေါင်းပင်ကြီးထွားမှုကိုနှိမ်နင်းရန်နှင့်သင်၏မြေဆီလွှာကိုပျိုးထောင်ရန်ကူညီသည်။ သူတို့သည်ကွန်တိန်နာများနှင့်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှပျော်ရွှင်ကြသည် ကုတင်များ (သို့) အပင်စိုက်သူများ သူတို့သည်မြေ၌ရှိသကဲ့သို့
ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့အာလူးဥတွေကရိတ်သိမ်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ပိုအရေးကြီးတာကသူတို့ကိုဘယ်လိုရိတ်သလဲ။ အာလူးရိတ်သိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်သည်သင်သိလိုသည့်အရာအားလုံးကိုပြောပြလိမ့်မည်။
သင်၏ကောက်ပဲသီးနှံများသည်ရိတ်သိမ်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါသင်၏ဒေသကြီးထွားလာမှုအခြေအနေနှင့်ရာသီဥတုအပါအ ၀ င်အချက်များစွာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၎င်းသည်သင်စိုက်ပျိုးထားသောအာလူးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ မျိုးစေ့အာလူးပင်များကိုအမျိုးအစား ၃ မျိုးခွဲထားသည်။
နာမည်အရင်းအတိုင်းပထမဆုံးအာလူးပင်များသည်သင်စိုက်ပျိုးနိုင်သောအစောဆုံးသီးနှံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်စတင်ရိတ်သိမ်းပါ။ ဒေသအများစုရှိဥယျာဉ်မှူးများသည်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှမတ်လလယ်အထိပထမဆုံးနားစိုက်နိုင်သည်။ ဥများသည် ၁၀ ပတ်မှ ၁၂ ပတ်ခန့်အကြာတွင်ရိတ်သိမ်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုသာယာလျှင်သင်အနည်းငယ်စောစောရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။
ပထမဆုံးနားရွက်များသည်အာလူးဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်မရှိသောကြောင့်ကြီးထွားရန်အလွယ်ဆုံးအာလူးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့၏နူးညံ့မှု၊ အရသာရှိသောအရသာကြောင့်လူသိများသောပထမနားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြက်ဥအရွယ်ခန့်ရှိပြီးအကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့်ကြက်ဥနှင့်အသားပျော့သည်။ လူကြိုက်များအမျိုးအစားများပါဝင်သည်:
Red Duke of York၊
သင်၏ပထမဆုံးနားရွက်ကိုစတင်ရိတ်သိမ်းရမည့်အချိန်အတိအကျကိုသိရန်သူတို့၏ပန်းများကိုဂရုပြုပါ။ အစောပိုင်းမျိုးများသည်မပွင့်သောသို့မဟုတ်မပွင့်နိုင်သောပန်းပွင့်များကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဘူးသီးများစတင်ကျဆင်းလာလျှင်သို့မဟုတ်ပန်းပွင့်မှေးမှိန်သောအခါသင်၏သီးနှံစတင်ရိတ်သိမ်းရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ သစ်ရွက်အချို့သည်လည်းအဝါရောင်ပြောင်းလာသည်။
သင်မရိတ်သိမ်းမီသင်၏အပင်ကိုစစ်ဆေးရန်အပင်၏ထိပ်တစ်ဝိုက်ကိုမြေဆီလွှာအနည်းငယ်ညင်ညင်သာသာရွှေ့ပါ။ ကြက်ဥတစ်လုံးအရွယ်ရှိသောအာလူးကိုသင်တွေ့လျှင်ရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ မင်းပိုကြီးတဲ့ spur တွေကိုလိုချင်ရင်သူတို့ကိုမြေကြီးထဲမှာနည်းနည်းပိုကြာကြာထားလိုက်ပါ။
ဒုတိယနားစိုက်ခြင်းကိုမတ်လအစောပိုင်း (သို့) မတ်လလယ်မှ စ၍ အများအားဖြင့်နွေ ဦး ၏ပထမဆုံး နေ့မှစ၍ ပထမဆုံးနားစိုက်စိုက်ပြီးနောက် ၂ ပတ်မှ ၃ ပတ်ခန့် အချို့သောစိုက်ပျိုးသူများသည်၎င်းတို့အားပထမဆုံးနားစိုက်ချိန်ကဲ့သို့တစ်ချိန်တည်းတွင်စိုက်ရန်နှစ်သက်သော်လည်းစောင့်ရန်ကောင်းသည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်စောင့်ခြင်းသည်သင်၏ပထမနားဆွဲကို ၃ ပတ်ခန့်အကြာရိတ်သိမ်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဟုဆိုလိုသည်။ လူကြိုက်များသောဒုတိယအစောပိုင်းမျိုးကွဲများပါဝင်သည်။
ပထမနားရွက်ကဲ့သို့ပင်သင်၏ဒုတိယနားရွက်များရိတ်သိမ်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဟုပြောရန်အလွယ်ဆုံးနည်းမှာပန်းများကိုကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ အပွင့်များ (သို့) မပွင့်သောဘူးသီးများသည်အပင်မှကြွေကျသည်နှင့်တပြိုင်နက်မင်းအာလူးစတင်ရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။
သင်၏ဒုတိယနားစိုက်ပြီးတစ်လခန့်အကြာတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်အစောပိုင်းရိတ်သိမ်းမှုအတွက်မတ်လလယ်မှ စ၍ maincrop spuds ကိုစိုက်နိုင်သည်။ Maincrops များသည်ရက်သတ္တပတ် ၂၀ ခန့်တွင်ရင့်ကျက်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်စောမျိုးများထက်ပိုကြီးသောဥများ၊ ၎င်းတို့သည်ကြီးထွားရန်အချိန်အနည်းငယ်ပိုလိုသည်။ အဖြစ်များသော maincrop tubers များ
ပန်းရောင် Fir Apple
ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည် maincrop အာလူးများကိုသြဂုတ်လတွင်စတင်ရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ သင်၏စိုက်ပျိုးသည့်ရက်အပေါ်မူတည်ပြီးစက်တင်ဘာလအထိကောင်းစွာရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ အရွက်အများစုသည်အဝါရောင်ဖြစ်ပြီးအညိုရောင်သို့စတင်ကျုံ့လာသောအခါ Maincrops များသည်ရိတ်သိမ်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။ သင်မရိတ်သိမ်းမီအပင်အားသေစေခြင်းဖြင့်ဥများကိုဓာတ်များစွာသိုလှောင်စေသည်။ ဒါကသူတို့ကိုအရသာဖြည့်ပေးပါတယ်။
သင်၏အဓိကကောက်ပင်များကိုရိတ်ရန်အပင်ကိုမြေပြင်အထက်တစ်လက်မခန့်ဖြတ်ပါ။ ဥကိုအခုထိမဆွဲပါနဲ့။ နောက်ထပ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်စောင့်ပါ၊ သူတို့သည်မရိတ်သိမ်းမီမြေ၌ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းသည်အာလူးကိုပျောက်ကင်းစေပြီးအရေပြားကိုမာကျောစေပြီးသိုလှောင်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ မင်းရဲ့ maincrop overwinter ကိုသိုလှောင်ဖို့မရည်ရွယ်ထားဘူးဆိုရင်အပင်တွေအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့မင်းစပြီးရိတ်နိုင်ပါပြီ။
ရိတ်သိမ်းချိန်သည်အပူချိန်ကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အာလူးပင်များသည်နှင်းခဲများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်းပထမဆုံးခဲနှင်းခဲများမကြွလာမီမြှင့ ်၍ သိုလှောင်ထားသင့်သည်။ မြေဆီလွှာသည်အနည်းဆုံး ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သင့်သည်။ သီးနှံများကိုဆေးကြောပြီးနောက်ဆောင်းရာသီနှင့်နွေ ဦး အစောပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်သုံးရန်သိုလှောင်နိုင်သည်။ သိုလှောင်ထားနိုင်သောကြီးမား။ နှောင်းပိုင်းရာသီသီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းသည်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံးသင်၏ကိုယ်ပိုင်အစားအစာကိုစိုက်ပျိုးပါ.
ရိတ်တဲ့အခါသတိထားပါ။ ဥများကိုမပျက်စီးအောင်ကြိုးစားပါ။ သင်၏ spuds များကိုသိုလှောင်ရန်ရည်ရွယ်လျှင်၎င်းသည်အထူးအရေးကြီးသည်။ ပျက်စီးသွားသောဥများကိုကောင်းစွာသိုလှောင်ရန်ခဲယဉ်းပြီးယင်းအစားသင်၏သီးနှံတစ်ခုလုံးပုပ်သွားစေနိုင်သည်။
ခြောက်သွေ့သောနေ့၌ဥများကိုရိတ်သိမ်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ စပါးရိတ်ရာကာလတွင်အစိုဓာတ်အလွန်များပါကပုပ်ခြင်းနှင့်ရောဂါတို့ကိုသက်သာစေနိုင်သည်။ မင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကွန်တိန်နာများတွင်အာလူးကြီးထွားလာသည် သို့မဟုတ်မြေပြင်၌ရိတ်သိမ်းမှုသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ပထမနှင့်ဒုတိယ Earlies များကိုမည်သို့ရိတ်ရမည်နည်း
အစောပိုင်းအာလူးသီးနှံတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ငါ့လက်ကိုသုံးရတာပိုလွယ်တယ်။ ဥယျာဉ်ခြံလက်အိတ် သင်၏လက်များကိုသန့်ရှင်းစွာကာကွယ်ထားရန်ကူညီသည်။
မြေကြီးထဲသို့ရောက်ရန်သင်၏လက်များကို သုံး၍ spuds များစွာကိုတူးပါ။ သင်ကြီးထွားနေစဉ်အတွင်းအပင်တစ်ဝိုက်ကိုမြေစောင်းပြီဆိုပါကမြေဆီလွှာကိုဂရုတစိုက်ဖယ်ရှားပါ၊ အပင်ပတ်လည်ရှိမြေဆီလွှာများကိုမပြုပြင်မီသင်လိုချင်သောအာလူးများကိုယူပါ။ ရိတ်သိမ်းချိန်တွင်သင်လိုအပ်သောအရာကိုသာ ယူ၍ အစောပိုင်းမျိုးများသည်ကောင်းစွာသိုလှောင်မထားပါ။ သူတို့သည်မြေဆီလွှာတွင် ပို၍ ကောင်းသည်။ တကယ်တော့လူတော်တော်များများကကြီးပွားပြီးဆက်လက်တိုးတက်နေပါတယ်။
ရိတ်သိမ်းပြီးနောက်aကိုသုံးပါ ငါး emulsion ဓာတ်မြေသြဇာ အပင်များသို့ ၎င်းသည်ဥအသစ်များနှင့်လတ်ဆတ်သောကြီးထွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သင်အာလူးကဲ့သို့သောကွန်တိန်နာတစ်လုံးတွင်သင်ကြီးထွားနေသည် Delxo7Gallon ကြီးထွားအိတ် စပါးရိတ်ရာပြတင်းပေါက်ရှိသည့်အပေါက်ကိုလွှင့ ်၍ အာလူးကိုမတွေ့မချင်းမြေကြီးကိုဖယ်ရှားပါ။ သင်လိုအပ်သောအရာကိုရိတ်သိမ်းပြီးနောက်ကမ္ဘာမြေကိုအစားထိုးနိုင်ပြီးကျန်အာလူးများသည်သင်သုံးရန်အဆင်သင့်သည်အထိဆက်လက်ကြီးထွားနိုင်သည်။
အာလူးပင်များကိုရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းတို့၌အရွက်များကြားတွင်အာလူးအစေ့ငယ်များကိုတွေ့ရပေမည်။ သူတို့ကမကြာခဏတူပါတယ် အစိမ်းရောင်၊ ခရမ်းချဉ်သီးမရ။ ဤအရာများသည်အဆိပ်အတောက် ဖြစ်၍ ဖျက်ဆီးပစ်ရန်သို့မဟုတ်နေရာပေါ်တွင်ထားသင့်သည် မြေဆွေးအမှိုက်ပုံ.
သင်၏ Maincrop ကိုမည်သို့ရိတ်သိမ်းရမည်နည်း
ပိုကြီးတဲ့အပင်တွေအတွက်မင်းအပင်တစ်ခုလုံးကိုမြှင့်တင်ဖို့ဥယျာဉ်ခုံးတစ်ခုသုံးဖို့လိုလိမ့်မယ်။ အပင်၏ဗဟိုမှတစ်ပေခန့်ကွာသောလမ်းခွဲကိုမြေကြီးထဲသို့ထည့်ပါ။ တတ်နိုင်သမျှမြေကြီးထဲသို့နက်ရှိုင်းစွာတွန်းပါ။ မင်းကအမြစ်တစ်ခုလုံးကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြှင့်တင်ဖို့ရည်မှန်းနေတယ်။ သင်ဤအရာကိုမလုပ်မီသင်ခက်ရင်းကိုအကြိမ်အနည်းငယ်ထည့်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ သင်စိုက်ထားခဲ့သည့်အာလူးများအတွက်အပင်ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်မြေကြီးအားစစ်ဆေးပါ။
ကွန်တိန်နာများတွင်ကြီးထွားနေသော Maincrop အာလူးပင်များအားကွန်တိန်နာ၏အကြောင်းအရာများကိုစောင်တစ်ချပ်ပေါ်သို့တင်ခြင်းဖြင့်ရိုးရှင်းစွာရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ သင်သည်မြေဆီလွှာထဲသို့သွန်ပစ်နိုင်သည် တွန်းလှည်းမရ။ မင်းရဲ့ spud တွေအားလုံးကိုစုဆောင်းဖို့မြေဆီလွှာကိုလှန်ပါ။
သင်သည်ဆောင်းရာသီသိုလှောင်မှုအတွက် maincrop သို့မဟုတ်အာလူးဥများကိုရိတ်နေပါကသီးနှံတစ်ခုလုံးမရိတ်သိမ်းမီ၎င်းတို့အားစမ်းသပ်ရန်အနည်းငယ်တူးပါ။ အရေခွံများသည်အသားထူရန်နှင့်အသားကိုခိုင်မြဲစွာထားသင့်သည်။ အပင်မှအရေပြားကိုအလွယ်တကူပွတ်နိုင်ပါကဥများသည်အသစ်ဖြစ်နေပြီးနောက်ထပ်ရက်အနည်းငယ်ကြာမြေ၌ထားသင့်သည်။
ရိတ်သိမ်းချိန်တွင်အပင်ကိုကြိတ်ခြင်း (သို့) ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုရန်သတိပြုပါ။ သိုလှောင်စဉ်ပျက်စီးသွားသောဥများပုပ်သွားသည်။
ရိတ်သိမ်းပြီးနောက်ဥများကိုခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် ၂ ပတ်ခန့်ထားပါ။ ဤကာလအတွင်းသီးနှံပတ် ၀ န်းကျင်၏အပူချိန်သည် ၄၅ မှ ၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိသင့်သည်။ အာလူးများသည်အရေခွံကိုမာကျောစေပြီးအသေးအဖွဲဖြတ်တောက်ခြင်းကိုတံဆိပ်ခတ်သည်။ ဆေးကြောပြီးနောက်သင်၏ဥများကိုသိုလှောင်နိုင်သည်။ ရိတ်သိမ်းပြီးနောက်သင်၏အာလူးကိုမည်သို့သိုလှောင်ရန်မသေချာလျှင်၊ ဤအရာသည်အလွန်လေးနက်သောလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်.
အာလူးများရိတ်သိမ်းသောအခါသို့မဟုတ်သိုလှောင်ခန်းမှ၎င်းတို့အားဖယ်ရှားသောအခါသူတို့၏အသားအရောင်ကိုအမြဲစစ်ဆေးပါ။ မည်သည့်အစိမ်းရောင်ဥကိုမဆိုရှောင်ပါ။ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အလင်းနှင့်အလွန်ထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော alkaloids ၏တိုးလာသောအဆင့်ရှိသည်။ အစိမ်းရောင် spuds များတွင် solanine ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဒါကသူတို့ကိုခါးသီးစေရုံတင်မကဘူး အဆိပ်ပြင်းသည်မရ။ စိမ်းလန်းစိုပြည်မှုကိုရှောင်ရှားရန်သင်၏အာလူးများကိုတတ်နိုင်သမျှမှောင်သောနေရာတွင်ထားပါ။
အာလူးစိုက်ပျိုးနေစဉ်နေရာများစွာယူနိုင်ပြီးအကျိုးရှိစွာလိုအပ်နိုင်သည် သီးနှံအလှည့်ကျစနစ်၊ ဒါဟာတကယ်ကြိုးစားရကျိုးနပ်ပါတယ်။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ရိတ်သိမ်းထားသောအာလူးဥများသည်စတိုးဆိုင်မှဝယ်ယူသော spuds များထက်ပိုနူးညံ့ပြီးပိုအရသာရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်စိုက်ပျိုးရန်နှင့်ရိတ်သိမ်းရန်အလွယ်ဆုံးသီးနှံများထဲမှတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။